LeEco na-ezube ịhapụ Silicon Valley | Gam akporosis
LeEco na-ezube ịhapụ Silicon Valley
N’ọnwa Ọktọba nke afọ gara aga, LeEco malitere mgbasawanye nke ụlọ ọrụ ya na azụmahịa ya na United States. Ihe omume a sitere na mmemme mwepụta siri ike nke ụlọ ọrụ ahụ webatara ma kwado ụgbọ ala eletrik. Na mgbakwunye, nkwupụta dị iche iche banyere ihe LeEco "usoro okike" ga-ahapụ, dịka anyị nwere ike ịgụ na gam akporo Autority, otu echiche nke mgbagwoju anya na ndị ọrụ na ndị ọkachamara: LeEco "hapụrụ ndị nta akụkọ na ndị na-azụ ahịa ọkọ na-akpụ isi ha".
Bọchị ole na ole agafeela kemgbe ihe omume ahụ mgbe Onye isi ụlọ ọrụ LeEco kwetara na mmụba ngwa ngwa nke ụlọ ọrụ anaghị arụ ọrụma ọ bụ. Ọnwa abụọ ka e mesịrị, ihe na-akawanye njọ ma ugbu a, LeEco yiri ka ọ na-anwa ire ihe onwunwe o nwere na mecca teknụzụ ụwa.
Dabere na ozi nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Reuters bipụtara, LeEco na-anwa ire ala 49-acre Silicon Valley, nke enwetara ihe na-erughi otu afọ site na Yahoo.
Mkpebi ahụ apụtaghị na ọ bụ ihe ijuanya, n'eziokwu, a na-ekwu na 'a ga-atụ anya ya' dịka akụkụ nke 'nnukwu ụlọ ọrụ na-ebelata ego', n'agbanyeghị eziokwu ahụ n'oge mmemme ụlọ ọrụ ahụ na United States ikpeazụ October, CEO Jia Yueting kwuru na ihe onwunwe "ga-abụ EcoCity na ụlọ 12.000 ọrụ."
Reuter na-achota na LeEco na-anwa iresị China onye nrụpụta Genzon Group ihe onwunwe ya maka $ 260 nde, nke na-egosi ịrị elu nke nde dollar 10 maka ọnụahịa o si nweta ya n'aka Yahoo!
N'oge a, LeEco achọghị ikwu okwu banyere ozi a, ma dabere na ikwupụta ya ka Reuters na "Anyị adịbeghị nkwadobe ịkekọrịta atụmatụ na ala [akụrụngwa], ebe anyị ka nọ na nhazi atụmatụ izizi."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » LeEco na-ezube ịhapụ Silicon Valley
Sony gosipụtara Xperia L1 na sentimita 5,5, 2GB RAM na igwefoto 13MP
You maara na ị nwere ike weghachite App akwụ ụgwọ?